परिवारभित्र फैलिँदै कोरोना- विविधा - कान्तिपुर समाचार
परिवारभित्र फैलिँदै कोरोना
भाद्र २०, २०७७ डा. शेरबहादुर पुन
– ‘डाक्टरसा’ब उहाँलाई पहिला कोरोना देखियो, अनि परिवारैले परीक्षण गरायौं, सानो बाबुबाहेक हामी सबै संक्रमित भइसकेछौं, लक्षण भने देखिएको छैन, अब के गर्ने होला ?’
पछिल्ला समय यस्ता प्रश्न बढ्न थालेका छन् । यी प्रश्नहरू पहिले सोधिँदै आएका प्रश्नहरूभन्दा अलि फरक छन् । किनकि पहिले एकादुई सदस्यमा देखिए पनि परिवारै कोरोनाबाट संक्रमित भएका केस खासै थिएनन् ।
कोरोनाको यो ट्रेन्ड केही समयअघि देखिँदै आएको भन्दा अलि फरक छ जुन निषेधाज्ञा सुरु भएपछि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । निषेधाज्ञामार्फत व्यक्ति वा परिवारबीच हेलमेल हुन नदिई संक्रमण नियन्त्रण गर्ने सरकारको कोसिस भए पनि परिवारका कुनै एक सदस्यमार्फत संक्रमण भित्रिएपछि भाइरसले सहजै पहुँच बढाएको पाइन्छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिनुमा यो कारण पनि मुख्य हो ।
सुरुमा जोकोही संक्रमित हुँदा अस्पताल लगिन्थ्यो, नेगेटिभ रिपोर्ट नआएसम्म डिस्चार्ज गरिँदैनथ्यो । लगभग तीन महिनाको लकडाउन खुलेर मानिसको आउजाउ बढेसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उच्च हुँदै गएको थियो । कमजोर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले संक्रमित समयमा पत्ता नलाग्दा कोरोना क्रमशः घरघर पुगेको देखिन्छ । पहिले–पहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिवारको कुनै सदस्य संक्रमित भेटिँदा अरूलाई सरेको खासै सुनिँदैनथ्यो । अहिले परिवारका अधिकांशलाई सरेका केस बढेका छन् । अहिले लक्षणयुक्त संक्रमित थपिएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । तर, विश्वमा गरिएका अधिकांश अनुसन्धानले ८०–९० प्रतिशत केसमा कुनै व्यक्ति संक्रमित हुँदा पनि परिवारमा नफैलिएको देखाएका छन् । कतिमा त श्रीमान्–श्रीमती बीचमै पनि संक्रमण नफैलिएको देखिएको छ । नेपालमा कोरोनाले पहिलोचोटि ज्यान गुमाउने महिला भर्खरै प्रसूति भएकी थिइन् तर उनीबाट जन्मिएको बच्चामा संक्रमण देखिएन । हामीकहाँ परिवारको एक सदस्यमा संक्रमण देखिए कति प्रतिशतसम्मलाई फैलन सक्छ भन्ने अनुसन्धान भएको छैन । तर यस्तो संक्रमण दर तुलनात्मक रूपमा बढ्दो क्रममा छ । यसो हुनुमा सायद निषेधाज्ञाले एकाघरका व्यक्तिबीच हेलमेल अझ बढ्नु पनि अर्को कारण हुन सक्छ ।
कोरोना परिवारमा घुम्न थालेपछि भने पाको उमेरका र दीर्घ रोगीहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । पहिलेको तुलनामा संक्रमितमा लक्षण देखिनु र मृत्यु हुनुमा यो एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ । सुरुसुरुमा विशेष गरी भारतबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना परीक्षण गर्ने गरिन्थ्यो । ती खास गरी युवा तथा स्वस्थ समूहका हुने भएकाले अपवादलाई छोडेर लक्षण पनि नदेखिने र मृत्युसमेत कम हुने गर्थ्यो । उनीहरूमा रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति तुलनात्मक रूपमा वृद्ध तथा दीर्घरोगीमा भन्दा बढी हुन्छ ।
चीनमा पनि कोरोना महामारीमा परिवारै संक्रमित भएका (इन्डोर संक्रमण) घटना धेरै हुने गरेको अध्ययनले देखाएका छन् । ३ सय २० सहरमा (जनवरी–फेब्रुअरी) ३ सय १८ कोरोना ‘आउटब्रेक’हरूको अनुसन्धान गर्दा झन्डै असी प्रतिशतजति पारिवारिक संक्रमण हुने गरेको नतिजा प्रकाशित भएको थियो । यी अनुसन्धानले कोरोना पारिवारिक रूपमा पनि सहजै ‘आउटब्रेक’ हुने देखाउँछन् । तर यसको अर्थ सबै संक्रमितको परिवारमा अनिवार्य संक्रमण हुन्छ नै भन्ने होइन । सतर्कता भने अपनाउनुपर्छ ।
हालको निर्देशिकाले परिवारमा कोही संक्रमित देखिए व्यवस्थापन गर्न ‘होम आइसोलेसन’को परिकल्पना गरेको देखिन्छ । तर परिवारै संक्रमित भए के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यसले अन्योल बढाएको यो पंक्तिकारसँग संक्रमितहरूको परामर्शबाट थाहा हुन्छ । निर्देशिकाले संक्रमित र परिवारका अन्य स्वस्थ व्यक्तिहरूले कसरी सतर्कता अपनाउने भन्नेबारे उल्लेख गरेको छ । परिवारका लगभग अधिकांश सदस्य संक्रमित हुँदा नाबालक संक्रमित नभएको अवस्था, घरको सक्रिय सदस्य नै संक्रमित भइदिँदा परिवारका वृद्ध वा दीर्घरोगीको खानपान तथा स्याहारसुसार कसले गर्नेजस्ता व्यावहारिक कठिनाइ देखिन्छन् । त्यस्तै परिवारै होम आइसोलेसनमा रहँदा दैनिक खाद्य सामग्री जोहो गर्नु अर्को चुनौती हुन्छ । तसर्थ हेर्दा सामान्य लाग्ने तर अत्यन्तै व्यावहारिक चुनौती सामना गर्नेबारे धेरैमा अनभिज्ञता, अन्योल र समस्या देखिन्छ । पारिवारिक संक्रमणको अवस्था आगामी दिनमा बढ्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । तसर्थ यस्तो चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सबैजसो सदस्य संक्रमित भएपछि परिवारमा मानसिक तनाब बढ्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा विशेषतः सकारात्मक सोच जगाउन छिमेकी/समुदायको मुख्य भूमिका हुन्छ । खोप विकास भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा जोकोही पनि जुनसुकै बेला संक्रमित हुन सक्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा संक्रमित परिवारलाई हौसला र सहयोग आवश्यक पर्छ । विशेषतः वृद्ध अनि दीर्घरोग भएकालाई जटिल लक्षण देखिन सक्ने र आइसोलेसनमा रहेका परिवारका अरू संक्रमित सदस्य बाहिर जान नसक्ने भएकाले छिमेकीले नै अस्पतालसम्म लैजान समन्वय गरिदिनुपर्ने हुन सक्छ । महामारी कुनै एक व्यक्ति/परिवारले मात्र कोसिस गरेर नियन्त्रणमा लिन सकिँदैन ।
अन्त्यमा, केही समययता विशेषतः लकडाउन हटाएसँगै कोरोना भाइरस पारिवारिक वृत्तमा भित्रिने र बाँकी सदस्यलाई पनि संक्रमित गर्दै जाने क्रम जारी छ । फलस्वरूप, वृद्ध तथा दीर्घरोगीहरू (जो अधिकांश समय घरभित्र हुन्छन्) पनि संक्रमित हुने र मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले कोरोना समुदाय स्तरमा पुगेको स्पष्ट संकेत गर्छ । आगामी दिन कोरोना समुदाय स्तरमा थप फैलने भएकाले वृद्ध तथा दीर्घरोगीहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।
(डा. पुन शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक हुन्)
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७७ १३:५४
कुनै आदिवासीले नैरचेको हुनुपर्छ पहिलो पृथ्वी त्यस समयदेखि यसलाई कसले फनफनी घुमाइरहेको छ ?